Iindaba - Kutheni izinto zeRPET zithandwa?
ekhaya / Iindaba
765 Ipapashwe ngu ulawulo Sep-22-2020
Baninzi ngakumbi abathengi abavela eYurophu abafuna oobhaka kunye neengxowa ezenziwe ngezinto zokurisayikilisha. Ngaba kukho naziphi na izinto ezilungileyo koobhaka kwizinto zeRPET?
RPET (Recycled Polyethylene Terephthalate) yinto entsha ezinokuphinda zisetyenziselwe izinto ezizinzileyo. RPET Ilaphu lolona hlobo luqhelekileyo lweplastikhi yeplastiki. Yenziwe ngeebhotile zeplastikhi (PET).
Iibhotile ziqhekezwa ngoomatshini zize zibe ngamaqhekeza amancinci zanyibilika ukuze ziphothwe zenziwe umsonto. Okokugqibela, umsonto ulukiwe kwilaphu eliphindiweyo le-polyester ukwenza iimveliso ezithandwayo, ezinje ngoobhaka, amalaphu, izihlangu.
Kukho izibonelelo zokubeka ilaphu le-RPET kwiimveliso ezichithayo:
Inokugcina iiplastiki zingayi ekugcwaliseni umhlaba kunye nolwandle.
Kukho iitoni zeplastiki ezingena elwandle minyaka le. Ngokwe-NGO Ocean Conservancy, i-8 yezigidi zeetoni zeplastiki zingena elwandle minyaka le, ngaphezulu kwe-150 yezigidi zeetoni ezijikeleza ngoku elwandle. Ukuba siyasigcina esi santya, ngo-2050 kuyakubakho iplastiki elwandle kunentlanzi.
Kwaye zininzi iiplastiki ezijika zaya kwinkunkuma. Ukujongana nale plastiki, wonke urhulumente kufuneka atyale imali eninzi ukuyigqithisela, ayingcwabe, okanye ayitshise, echaphazela okusingqongileyo ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile.
Ukuba siphinda sisebenzise zonke ezi plastiki, kuya kuba luncedo ebantwini nasezintlanzini nakokusingqongileyo.
I-2.RPET iphantse ibe ngumgangatho njenge-polyester eyintombi, kodwa thatha amandla amancinci ukwenza.
Iinkcukacha-manani eziboniswe ngamaGreener Fabrics: umboneleli okhokelayo we-RPET esekwe kumalaphu abonisa (xa kuthelekiswa ne-polyester eyintombi):
85% yamandla amancinci afunekayo
Ukukhutshwa okungaphantsi kwama-65%: I-50-65% ikhuphe iCarbon kunye neSalfure Dioxide
Amanzi angaphantsi ngama-90% efunekayo
I-3.RPET ukuza kuthi ga ngoku ayigqibanga. Kodwa iya kukhuthaza ngakumbi nangakumbi ngokubaluleka kokuphinda kusetyenziswe izinto ezindala ukuvelisa iimveliso ezintsha esizisebenzisa mihla le. Ekuhambeni kwexesha, ubuchule bokusetyenziswa kwakhona buya kuphuculwa ngakumbi nangakumbi. Zonke ezi zinto ziya kunceda ukunciphisa inkunkuma emhlabeni kangangoko kunokwenzeka, kwaye yenze imeko-bume yethu ngokuvisisana ngakumbi.